DIGNIIN KANSAR: Cabsi laga qabo Garoomada uu yaalo cowska Macmalka ah – Gool FM
Byare October 11, 2016
(World) 11 Oktoobar 2016. War ka soo baxay TV laga leeyahay dalka Dutch-ka ayaa su’aal galiyay in cinjirka loo isticmaalo in lagu dhiso garoomada macmalka ah ay qatar galin karaan caafimaadka ciyaaryahannada iyo in kale.
Ku dhawaad 30 kooxood oo kubadda cagta ka ciyaarta dalka Holland ayaa albaabada u laabay garoomadoodii macmalka ahaa iyagoo ka cabsanaya inay garoomadaas ay keeni karaan qatar dhanka Kansarka ah.
Digniintan lamid ah ayaa laga maqlay dalka Talyaaniga 10 sano ka hor, haddana dowladda looga arimiyo Hague ayaa ku baaqday in si dag-dag ah loo baaro arimaha ku saabsan maqaalkaas talafeshinka baahiyay.
Professor Martin van den Berg, oo ku taqasusay barashada SUNTA oo wax ka dhiga jaamacadda Utrecht, ayaa ka sheegay barnaamijka Zembla ee ka baxa talefishinka in cowska ay tahay inaan la isticmaalin ilaa qataraha waa wayn la hubiyo.
“Qof ku taqasusay SUNTA ahaan, waxaan dhihi lahaa: Kuma aanan dheeli lahayn garoomadaas waayo ma sameyn karno qiimayn ku haboon oo la xariirta qataraha jiri kara,” saas ayuu yiri.
Iminka, Machadka Sare ee Caafimaadka ayaa si balaaran u eegi doona kaddib markii si baahsan loo faafiyay arintaan.
Qiyaas ahaantiid ilaa 30 kooxood oo kuwa heerarka hoose ka ciyaara ayaa laga joojiyay ama lagu qasbay inay xiraan garoomadooda sababtoo ah qataraha ka imaan kara garoomadda macmalka ah iyo warshadihii sameeyay ayaa qatar galin kara caafimaadka ciyaaryahannada.
Maadada laga sameeyay garoomadaan macmalka ah iyo waxyaabaha ka imaada xiliga ay u soo ban baxayso curiyayaasha ayay u tixgalinayaan qaar kamid ah khubarada inay tahay mid sababta Kansar.
Xiriirka kubadda cagta Dutch-ka ayaa jawaab celin ka baxshay iyagoo dhahaya in loo baahan yahay in la sameeyo baaritaano la xariira in maadada kansarka dhalisa ee ku jirto cinjirada laga keenay taayiradda duqoobay lagana sameeyay garoomadan macmalka ah ay u gudbi karaan jirka ciyaaryahannda.
Wuxuu ku amray khubaradda culuumta iyo Sunta in la sameeyo cilmi baaris sanaddii 2006, balse waxaa la rumeysan yahay inay ahayd mid aas aasi ah.
Horaantii sanadkaan, Midowga Yurub ayaa amray in la sameeyo baaris ku saabsan saameynta ay yeelan karto cinjirka la isticmaalo iyo raadadka la filayo dhamaadka sanadka.
''Maldini dhaqse ayuu khaladkiisa u garowsan doonaa'' - Sino-Europe Sports oo qaniintey Paolo Maldini
Isreeb-reebka K/Adduunka 2018: Jarmalka oo ka guuleystay Ireland, Ingiriiska oo barbar dhac la galay Slovenia iyo kulammadii kale